Cat's claw (ကြောင်လက်သည်းပင်) - Hello Sayarwon
Cat’s claw (ကြောင်လက်သည်းပင်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Cat’s claw (ကြောင်လက်သည်းပင်)
Cat's claw (ကြောင်လက်သည်းပင်) ကဘာလဲ။
ကြောင်လက်သည်းပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ကြောက်လက်သည်းပင်ကို ကိုယ်ခံအားစနစ်လှုံဆော်ပေးရန်နဲ့ အရောင်ကျရန်အတွက် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အဆစ်ရောင်ရောဂါ၊ လေးဘက်နာရောဂါ များအတွက်လည်း များသောအားဖြင့် သုံးလေ့ရှိတယ်။
အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ Crohn’s ရောဂါ များကဲ့သို့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများအတွက်လည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
တချို့တွေက herpes zoster, herpes simplex ပိုးများကြောင့်ဖြစ်သော ရေယုန်၊ HIV ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော AIDS ကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများမှာလည်း သုံးတတ်ပါတယ်။
CFS ဟုခေါ်သော နာတာရှည်နွမ်းနယ်တတ်သောရောဂါ၊ အနာကျက်မြန်ရန်၊ ကပ်ပါးရောဂါများ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ကင်ဆာ ( အထူးသခြင့် ဆီးလမ်းကြောင်းကင်ဆာ)၊ glioblastoma ဟုခေါ်သော ဦးနှောက်ကျိတ်ကင်ဆာတစ်မျိုး၊ gonorrhea ၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ သန္ဓြေတားရန်၊ အရိုးနာခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ဆေးရန် စသည်ဖြင့်လည်း အမျိုးမျိုးသုံးတတ်ကြပါသေးတယ်။
ထိုဆေးဘက်ဝင်အပင်လုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်လို့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ။် ဒါပေမယ့် ကြောင်လက်သည်းပင်မှာ အရောင်ကျစေနိုင်သော၊ ကိုယ်ခံအားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိတာကိုတော့ လေ့လာတွေ့ရှိပြီးပါပြီ။
ထိုအာနိသင်တွေဟာ ကြောင်လက်သည်းမှာ မျိုးစုံသော ဓါတ်ပေါင်းတွေပါဝင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ တိကျတဲ့လေ့လာမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။
ကြောင်လက်သည်းပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကြောင်လက်သည်းပင်ဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအတွက် ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား မသေချာသေးပါဘူး။ FDA မှအတည်ပြုမှုမရှိသေးပါဘူး။
သွေးပေါင်ကျစေတာကြောင့် သိသိသာသာသွေးပေါင်ကျလာပါက ဆက်မသုံးပါနဲ့။
ခွဲစိတ်ရန်ရှိပါက မခွဲစိတ်ခင် ၂ ပတ်အလိုကတည်းက သုံးစွဲမှုရပ်လိုက်သင့်ပါတယ်။
ဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေက ဆေးတွေလောက် စည်းကမ်းမတင်းကြပ်ပါဘူး။ ဘေးကင်းမှုကို ထောက်ခံပေးဖို့က လေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာတွေကို မမှီဝဲမီ ရနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ချင့်ချိန်သင့်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ကြောင်လက်သည်းပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
လေ့လာမှုတွေမရှိသေးခင်ထိ ကြောင်လက်သည်းပင်ကို ကလေးတွေမှာမပေးပါနဲ့။
ကိုယ်ဝန်သည်တွေ သောက်သုံးရန် အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ချေရှိပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် ဘေးကင်းမကင်းလည်းမသေချာသေးတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ခံအားစနစ်ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားမှမှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပိုဆိုးနိုင်စေပါတယ်။
ပုံမှန်မဟုတ် သွေးယိုစီးမှုရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးယိုမှု၊ အညိုအမည်းစွဲမှုတွေ ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်လို့ သံသယရှိပါတယ်။
သွေးပေါင်လည်းကျနိုင်စေတာကြောင့် သွေးပေါင်ကျတတ်သူများ မသုံးသင့်ပါဘူး။
ကြောင်လက်သည်းပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်မကောင်းခြင်း များကဲ့သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများ၊ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှု၊ အာရုံကြောထိခိုက်မှုနဲ့ သွေးယိုစီးမှုများစေတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါသေးတယ်။
လူတိုင်းက ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမရပါဘူး။ ဖော်ပြထားတာတွေထဲမပါတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ပတ်သတ်လို့ စိတ်ပူတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို ပြောပြတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိနေပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါရန်
ကြောင်လက်သည်းပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာဝန်ကိုပြောပြတိုင်ပင်ပါ။
ယခုဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွက်စာသည်သင်၏လက်ရှိဆေးဝါးများနှင့် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိပါသည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါရန်
ကြောင်လက်သည်းပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
လူနာအသီးသီးအတွက် ပမာဏအသီးသီးဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နဲ့ တခြားအချက်တွေ အများအပြားပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ။်
ကျန်းမာရေးဖြည့်စွတ်စာတွေဟာ အမြဲဘေးကင်းနေတာတော့မဟုတ်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကြောင်လက်သည်းပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဆေးတောင့်၊ ဆေးပြား၊ အမြစ် (အမှုန့် သို့ အစိမ်းတိုင်း)
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 30, 2017
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 151.
Cat’s claw. http://www.drugs.com/drug-interactions/cat-s-claw.html. Assessed August 6, 2016.
Cat’s claw. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-395-cat's%20claw.aspx?activeingredientid
Crohn Disease Surgery (ခရုန်းရောဂါအား ခွဲစိတ်ခြင်း)
ခရုန်းရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း